Yenhoroondo Kosi - Saka Fine Plastic Technology Co.
Saka Fine yakavambwa naVaWang Weiqiang muBeijiao, Shunde & yakatanga sebhizimusi repurasitiki.
Ndichiri kuchengetedza bhizinesi repurasitiki, Saka Zvakanaka zvakatanga kugadzirwa uye kutengesa kweinodzivirira girazi uye furiza / inotonhorera / inotonhorera girazi mikova & isu takatanga kushandira pamwe neyekutengesa firiji & inotonhorera mugadziri muChina uye yakapa Saka Zvakanaka magirazi magonhi kune ava vagadziri.
Saka Fine akatanga kuona kuwedzera mukutengesa kwefriji girazi gonhi. Isu takagadzira kubatana pamwe nevakawanda vekumba firiji vagadziri. Panguva imwecheteyo, chikwata chedu chakakura kubva pavanhu makumi matatu kuenda kuvanhu vanopfuura makumi mashanu.
Saka Fine akatanga kuenda kuCanton fair uye kuyedza kuvhura musika wepasi rose wezvekutengeserana gore rino.
Sezvo kudikanwa kwemusika uye wekunze kwemusika wefriji zvigadzirwa zvawedzera, Saka Fine girazi remukova bhizinesi zvakare rakaunza mukukurumidza kukura. Chikwata chedu chakakura kusvika kuvanhu makumi masere uye isu takabatana pamwe nevamwe vatengi vemhando kubva kuEurope neNorth America Market. R & D chikwata chedu chakaedza zvakanyanya kuwedzera zvigadzirwa zvegiraziand isu takawedzera mutsva wekugadzira mutsara weyakavharwa louver girazi uye takaedza kuongorora mukana wekushandira pamwe muhwindo & nemikova nzvimbo.
Iko kukura kwakadzikama kwemabhizimusi epamba uye epasi rese kwatiunzira kukurumidza kukura kwebhizimusi vhoriyamu. Saka Zvakanaka kuenda kufekitori nyowani hombe muHongsheng indasitiri nzvimbo yeLunjiao, Shunde.
Chikwata chedu chakakura kusvika kuvanhu zana.
Mukupindura kune chaiko zvinodiwa nevatengi nemisika, Saka FNee yakavamba fekitori nyowani yekutengesa firiji & inotonhorera. Isu tinokwanisa kupa zvakawanda kusarudza kune vatengi vedu. kambani yedu iri kuunza otomatiki zvigadzirwa zvekugadzira uye inonamira kushandisa 60% yekugadzira kwedu mukati megore rino.